Drogba oo ka hadlay abaal-marinta Ballon d’Or 2019 & Xiddigaha ku guuleysan kara – Gool FM
(Yurub) 22 Sebt 2019. Halyeeyga Didier Drogba ayaa aaminsan in xiddigaha afrikaanka ah ay ku guuleysan karaan abaal-marinta Ballon d’Or 2019.
Didier Drogba ayaan ku guuleysanin abaal-marinta xiisaha badan ee Ballon d’Or, marka loo fiiriyo xirfadiisa cajiibka aheyd ee kubadda cagta, inkastoo kaalinta afaraad uu kaga dhameystay sanadkii 2007-dii.
Weeraryahankii hore ee kooxda Blues ayaa abaal-marinta ay bixiso France Football loo xushay inuu wakiil ka noqdo xilli ciyaareedkan, wuxuuna guudoonsiin doonaa xiddiga ku guuleysta abaal-marintan 2-da bisha soo aadan ee Diseembar.
Didier Drogba ayaa wareysi uu ku bixiyay “France Football” ayaa wuxuu kaga hadlay suurtogalnimada uu xiddig Afrikaan ah ugu guuleysan karo abaal-marinta sanadkan wuxuuna yiri:
“Haa, waxaan u maleynayaa in Sadio Mane iyo Maxamed Saalax ay ku guuleysan karaan abaal-marinta Ballon d’Or, waxay qaateen xilli ciyaareed weyn oo kooxda Liverpool ah waxayna ku guuleysteen Champions League”.
Mar wax laga weydiiyay Drogba musharaha uu arko inuu sanadkan ku guuleysan karo, ayaa wuxuu ku jawaabay:
“Way adkaan doontaa, maxaa yeelay waxaa jira ciyaartoy badan oo runtii aad u wanaagsan, Waxaa jira Lionel Messi, Sadio Mané, oo soo qaatay xilli ciyaareed cajiib ah”.
“Sidoo kale Maxamed Saalax wuxuu sii joogteeyay qaab ciyaareedkiisa cajiibka ah, waxaa jira Virgil van Dijk, kaasoo xilli ciyaareed fiican la qaatay Liverpool”.
Shaxda rasmiga ah kulanka ee West Ham United iyo Manchester United oo la shaaciyey... (Yuu ku soo bilaabay macallin Ole?)